Doowlada oo ballaarineeysa daryeelka Ciidamada
Home Somali News Somali Government Doowlada oo ballaarineeysa daryeelka Ciidamada
Wasaarada Gaashaandhiga Soomaaliya ayaa sheegtay ineey socdaan qorshayaal xoogan oo dib loogu hagaajinayo Ciidamada XDS iyo sidii loo ballaarin lahaa daryeelka Ciidamada qaybahooda kala duwan.
Wasiirka Gaashaandhigga oo ay wehliyaan saraakiisha ciidammada Xoogga dalka oo kormeer shaqo ku joogga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxa uu sheegay sida ugu wanaagsan ee uu ku socda dajinta qorshanha lagu dhammeystirayo howlgallada gobollada Baay iyo Bakool iyo kuwa kale.
C/xakiin Xaaji Fiqi, wasiirka Gaashaandhiga waxa uu xusay in doowlada ay dajisay qorshe ballaaran oo lagu xoojinayo daryeelka Ciidamada XDS iyo sidii loo tayeen lahaa islamarkasna qalabkooda loogu dhamaystiri lahaa.
Horay ayaa Ra’iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid mar uu baarlamaanka lahadlayay waxa uu ballan qaaday in xukuumadiisu diyaar utahay ineey wanaajiso duruufaha Ciidamada.
Ra’iisul wasaaraha waxa uu ballan qaaday in Ciidamada dhamaan ay mushaaroodkooda heli doonaanlaga bilaabo bisha January ee Sanadka cusub.
Sidoo kale Xukuumada aya ballan qaaday in hada wixii ka danbeeyo aad loo daryeeli doono xaalada Caafimaad ee Ciidamada, askarta ku dhaawacanta dagaaladana loo qaadi doono dalka dibadiisa.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo Wafdi uu hoggaaminaayo ayaa...